VOAHOSOTRA NY MICROSOFT EDGE AO AMIN'NY WINDOWS 10 1809 UPDATE, ITY MISY VAOVAO - WINDOWS 10
Voahosotra ny Microsoft Edge ao amin'ny Windows 10 1809 Update, Ity misy vaovao
Isaky ny fanavaozana ny endri-javatra Windows 10, Microsoft dia manao asa marobe amin'ny navigateur Edge misy anao hanakaiky kokoa ny chrome sy ny firefox mpifaninana aminy. Ary ny farany Windows 10 Oktobra 2018 Vaovao farany mitondra miaraka aminy ny kinova Microsoft Edge tsara indrindra. Miaraka amin'ny fiasa sy fanatsarana vaovao, nahazo endrika vaovao sy motera vaovao i Edge ary manavao ny sehatra web amin'ny EdgeHTML 18 (Microsoft EdgeHTML 18.17763). Ankehitriny dia haingana kokoa, tsara kokoa, ary misy fiasa sy fanatsarana vaovao izay manamora ny fitadiavana ireo safidinao rehetra. Eto amin'ity lahatsoratra ity dia nangoninay ny fiasa vaovao Microsoft Edge & fanatsarana nampiana tao amin'ny Windows 10 Version 1809.
Hevitra ato Anatiny FAMPISEHOANA 1 Windows 10 1809, inona no vaovao ao amin'ny Microsoft Edge? 1.1 Menio nohavaozina 1.2 Control Media Autoplay 1.3 Menio fanatsarana nohatsaraina 1.4 Fanatsarana ny fomba famakiana sy ny fitaovana ianarana 1.5 Fitaovana amin'ny mpamaky PDF 1.6 Fanamarinana ny tranonkala
Windows 10 1809, inona no vaovao ao amin'ny Microsoft Edge?
Miaraka amin'ny Windows 10 kinova 1809, tsy maintsy hanova ny fomba fitetezana Internet ny mpikirakira tranonkala natsangana, misy fivoahana vaovao maromaro sy fiasa vaovao marobe ao amin'ny Microsoft Edge izay misy fampiharana Fluent Design an-tsokosoko. fiasa vaovao hanamarinana tsy misy teny miafina sy fanaraha-maso autoplay media amin'ny tranokala. Ny fanohanana ny famakiana, PDF, ary EPUB dia mahazo fanatsarana marobe ary maro hafa.
Miaraka amin'ny fanavaozana ny Windows 10 Oktobra 2018 dia nanova endrika ny menio '…' i Microsoft ary ny pejy Fikirakirana izay manamora ny fitetezana sy mamela ny fanaingoana bebe kokoa hametraka eo alohan'izay hetsika efa mahazatra. Rehefa manindry '….' ao amin'ny toolbar an'ny Microsoft Edge, mety hahita commande vaovao vaovao toy ny 'New tab' sy 'Window vaovao' ianao izao. Ho hitanao ihany koa fa ny singa dia mizara ho vondrona maromaro kokoa, ary ny singa tsirairay izao dia manisy kisary sy ny hitsin-dàlana fitendry mifanila aminy hamantarana haingana ny safidy tianao hidirana. Ny menio koa dia misy zana-menu telo. ny Asehoy amin'ny boaty mamela anao manampy sy manaisotra baiko (oh: Favorites, Downloads, Tantara, lisitry ny famakiana) avy ao amin'ny baraovana.
nianjera ny windows 10 taorian'ny fanombohana
Ny fitaovana bebe kokoa dia misy ny baiko hanao hetsika maromaro, ao anatin'izany ny fampitam-baovao amin'ny fitaovana, pejy ping mankany amin'ny menio Start, open Tools Fampandrosoana na pejy web mampiasa Internet Explorer.
Control Media Autoplay
Iray amin'ireo fanovana lehibe indrindra hita tao amin'ny Microsoft Edge ao amin'ny Windows 10 Oktobra 2018 Vaovao farany ny fampidirana fanaraha-maso ho an'ny haino aman-jery izay milalao mandeha ho azy. Afaka manamboatra tranokala afaka mampiasa haino aman-jery autoplay izao ny mpampiasa avy amin'ny Settings> Advanced> Media Autoplay, miaraka amina safidy telo samy hafa antsoina hoe allow, limit, and block.
Avelao - mitazona hatrany ny autoplay mamela ny tranokala hifehy ny horonan-tsary autoplay eo aloha.
Fetra - tsy mandeha ny autoplay rehefa tsy misy dikany ny horonan-tsary, fa rehefa manindry ianao na aiza na aiza amin'ny pejy, dia halefa indray ny autoplay.
Block - manakana ny filalaovana horonantsary mandeha ho azy ny horonan-tsary mandra-pifandraisanao amin'ilay horonantsary. Ny hany fampitandremana amin'ity safidy ity dia mety tsy hiara-miasa amin'ny tranonkala rehetra izy io vokatry ny famolavolana fampiharana.
Azo atao ihany koa ny mifehy ny haino aman-jery autoplay isaky ny tranokala, manindry ny kisary hidin-trano eo ankavanan'ny baran'ny adiresy ary eo ambanin'ny 'Fahazoan-dàlana amin'ny Internet', kitiho ny Fikirana haino aman-jery autoplay Safidio, ary hamelombelona ny pejy hanovana ny toe-javatra.
Menio fanatsarana nohatsaraina
Microsoft Edge dia mahazo an nohatsaraina menio fanovana (miaraka amina sary masina ho an'ny endriny voadio) izay manaparitaka ireo safidiny ho takelaka misy pejy, nalamina tamin'ny sokajy ho an'ny traikefa haingana sy mahazatra kokoa. Ary koa, ny traikefa napetraka dia mizara ho pejy efatra, ao anatin'izany ny 'General,' 'Privacy & security,' 'Password & autofill,' ary 'Advanced' handaminana tsara ireo safidy azo atao.
Fanatsarana ny fomba famakiana sy ny fitaovana ianarana
Ny fomba famakiana sy ny fitaovan'ny fianarana dia nihatsara ihany koa niaraka tamin'ny fahaizany bebe kokoa, toy ny safidy hifantohana amin'ny atiny manokana amin'ny fanasongadinana tsipika vitsivitsy fotsiny mba hanesorana ireo fanelingelenana. Ity dia ampahany amin'ny ezak'i Microsoft manao an'i Edge mihoatra ny navigateur ary manatsara ny fahaizany mamaky.
Safidy famakiana vaovao ihany koa ny vakizoro, ary mampiditra ny 'Fifantohana tsipika', izay fiasa manasongadina andalana iray, telo na dimy izay manampy anao hifantoka amin'ny famakiana atiny.
Rakibolana amin'ny fahitana azy: Microsoft Edge dia efa manome jery famakiana tena tsara ho an'ireo antontan-taratasy sy e-boky PDF. Ny orinasa dia nanitatra ity fizarana ity tamin'ny rakibolana manazava ny teny tsirairay rehefa mamaky ny Jereo, Boky, ary PDF. Misafidiana teny tokana fotsiny hahitana ny famaritana hita eo ambonin'ny safidinao. Ho fanampin'ireo voalaza etsy ambony.
mpamily mpamily usb serial serial
Ary koa, ny mpitety tranonkala dia mandefa miaraka amin'ny kinova fanavaozana ireo fitaovana fianarana tsy voatery ho an'ny boky famakiam-boky sy EPUB. Mandritra ny fampiasanao ireo fitaovana ianarana ao amin'ny Read View, dia ho hitanao ny fanatsarana vaovao maro, ao anatin'izany ny 'Fitaovana fitsipi-pitenenana', sy ny 'Safidy lahatsoratra' ary ny 'safidin'ny famakiana.' Ao amin'ny Fitaovana fitsipi-pitenenana takelaka, ny fampiasa 'Fizarana kabary' ankehitriny dia mamela anao hanova ny loko rehefa manasongadina anarana, verbe, adjectif, ary azonao atao ny mampiseho laboires mba hahamora kokoa ny mamantatra ny teny.
Fitaovana amin'ny mpamaky PDF
ny Fitaovana PDF izao dia azo antsoina amin'ny alàlan'ny fandehanana eny an-tampony mba hahatonga ireo fitaovana ho mora idiran'ny mpampiasa. Mba hanatsorana ny fiasan'ny Edge amin'ny maha mpamaky PDF azy, dia nampiditra lahatsoratra fohy eo akaikin'ny sary masina ao amin'ny boaty ho an'ny fitaovana i Microsoft. Ho fanampin'izay, misy izao ny safidy hikasika ny baraingo ary nanao fanatsarana ihany koa ny fandefasana antontan-taratasy i Microsoft.
windows 10 mampiasa usb toy ny ondrilahy
Ary koa, rehefa miasa miaraka amina rakitra PDF dia azonao atao izao ny mitondra ny baraovana amin'ny alàlan'ny fanidinana fotsiny ny tampony, ary azonao atao ny manindry ny bokotra pin mba hahitana ny baraingo foana.
Fanamarinana ny tranonkala
Endri-javatra iray hafa tonga amin'ny Microsoft Edge dia Fanamarinana ny tranonkala (fantatra koa amin'ny hoe WebAuthN) izay fampiharana vaovao izay miditra amin'ny Windows Hello mba hahafahanao manamarina tsara amin'ny tranokala hafa ary tsy manoratra teny miafina intsony, amin'ny alàlan'ny dian-tànana, fanekena tarehy, PIN, na Teknolojia FIDO .
Miaraka amin'ity Microsoft Edge ity dia manome fanatsarana fanampiny fanampiny izay misy vaovao Singa mahomby amin'ny famolavolana mankany amin'ny navigateur Edge mba hanomezana azy traikefa voajanahary bebe kokoa miaraka amin'ireo mpampiasa mahita fiatraikany lalina amin'ny bara fisaka.
Ho fanampin'izany, Microsoft Edge dia mampiditra ny politika vaovao momba ny Group Policies and Mobile Device Management (MDM) izay ahitana ny fahafaha-mamela na hanafoana ny efijery feno, hitahiry tantara, bara ankafizinao, mpanonta, bokotra an-trano ary ireo safidy fanombohana. (Azonao atao ny manamarina ny politika vaovao rehetra amin'ity Tranonkala fanampiana Microsoft. ) hanampiana ireo mpitantana ny tambajotra hitantana ny toe-javatra araky ny politikan'ny fikambanana.
Ireto misy fanovana vitsivitsy hitanay taorian'ny fampiasana ny Microsoft edge amin'ny fanavaozana Windows 10 1809, Oktobra 2018. Miaraka amin'ireo fanatsarana ireo amin'ny navigateur edge, ny fanavaozana ny Windows 10 Oktobra 2018 dia mitondra fiasa vaovao maromaro izay misy ny fampiharana findainao, mpikaroka lohahevitra maizina, tantara an-tsarimihetsika vita amin'ny rahona, sns. Zahao Top 7 Vaovao endri-javatra nampidirina tamin'ny fanavaozana ny Oktobra 2018 , Version 1809.
Windows 10 manavao ny kolikoly amin'ny database
maninona no tsy mandeha ny ethernet-ko
vpn mifandray tsy misy fidirana amin'ny Internet
windows 10 mitsikera_fomba_tsy maty
Windows 10 niraikitra taorian'ny fidirana
Windows 10 dia mila mikatona mandrakizay
chrome tsy mandeha aorian'ny Windows 10 vaovao farany 2019